gaabinta : TO
Ha iloobin in aad discuss Ajou University
Taariikhda University Ajou ayaa ka buuxsamay caqabado cusub: waxa uu xudduud cusub ee Korea ee waxbarashada sare ma uu furin keliya by bandhigid nidaamka double-degree la jaamacadaha ajnabi ah markii ugu horeysay ee ka mid ah jaamacadaha Korean, laakiin waxa uu ku koray sidii mid ka mid ah jaamacadaha ugu horeeysa ee kaliya abbaaraha afartan sannadood ah tan iyo markii ay aasaaska.
Hadda, Ajou ayaa qarka u saaran in ay qaataan on weli caqabad kale. Waxaa la riyoodaan oo ay "Second Dhismaha" si ay u dhigaan aasaaskii ay hal sano boqol sida jaamacad sare iyo si ay u noqdaan ishaartay oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha dhabta ah ee bulshada.
Iyada oo koritaanka taranta iyo tayada orgida a, waxaana naga go'an inaan furitaanka Zaman ee "Ajou Premium" oo la beddelo dunida magaca Ajou sida soo socota:
First, Update University saari doontaa talanti wanaagsan, kuwaas oo caddayn labada ardayda ee naftooda iyo bulshada oo dhan.
University Ajou abuurto doonaa ardayda la "Awoodda ay u noolaadaan" bulshada our tartan la aqoon aasaasi ah iyo waxbarashada adag ee heerkoodu sareeyo ay, ah "Awoodda qaadashada hindisaha" si ay u heli kartaa waxa ay doonayaan iyo xalinta dhibaatooyinka on iyaga u gaar ah, iyo "Awoodda nool habboonaanta" oo ay ku jira xaddi ah ee dadka kale iyo kala duwanaanta si ixtiraam.
labaad, University Ajou xoogayn doonaa hoggaanka cilmi iyo Hogaaminaya ee jaamacadaha iyo warshadaha labada.
Update University eryanaysaa "Cilmi evolutional" via abuurka iyo wada ku salaysan aqoonta asaasiga ah iyo "Cilmi u fiican" iyada oo loo marayo tartan iyo nidaam niyad cusub codka, oo aan dhalin doono "Cilmi wax ku ool ah"Natiijada via iskaashiga u dhexeeya warshadaha, jaamacadaha, hay'adaha cilmi-baarista, iyo ururada dadweynaha.
saddexaad, University Ajou dhammaystiri doonaa doorkeena iyo waajibaadka beddelo bulshada iyo furitaanka marxalad cusub.
Waxaan diiradda saari doonaa awoodaha ku saabsan "In la dhiso raasamaal bulsheed" waayo nool habboonaanta, "Hagaajinta dhaqdhaqaaqa bulshada" taas oo u oggolaanaysa in shakhsiyaad si ay u sii weynaydba guurto ku salaysan dadaalka iyaga u gaar ah, iyo "Diyaarinaya midoobidda ee Koreas ah" marka lagu daro kordhin our gaari caalamka.
In si ay u ogaadaan aragtidan, the people of Ajou University will begin three “Pleasant Innovations.”
Innovation waa hadal ah oo go'aan xoog in ay ka gudbaan oo bedeli xaqiiqada hadda la, abuuro mustaqbalka in rajayno. Waxaa mana soo noqnoqda, waxa aynu samaynay ee la soo dhaafay, mana soo socda jidka kalena ay qaaday oo kaliya si dhakhso ah. Waxaa furitaanka Waddooyinkiisa cusub on our u gaar ah xamaasad.
waa abuurnimo ee deegaanka si ay u hal-abuur ka gudbaan caqabadaha na soo food saartay; abuurnimo nafteena, jebinta ka iyo siyaabo hore ee fikirka iyo shaqada noo beddelo, iyo hababka kale ee nafteena; iyo abuurnimo bulshada horumarinta bulshada hab dhawaaqa, iyadoo isku dhacyada iyo kala qaybsanaanta.
Kuwani waa Innovations wacanu oo xiiso leh maxaa yeelay, waxaannu ku faraxsan yihiin in ay yeeshaan, halkii la sheegay in ay dadka kale.
Kuwani tabo cusub u wacan dadka Ajou waxay keeni doontaa in tabo cusub ka farxin bulshada oo dhan oo ka mid ah Republic of Korea oo dhan.
Haddii Hagaaji Shanghai, bulshadeena bedeli doono iyo sidoo. Iyada oo kalsoonida this, ma jirto xaddidaadda in our geesinimada in ay waajahaan caqabadaha na wajihi, iyo xamaasad u ogaaday riyooyinkayagii waa dhammaadka lahayn.
Fadlan taageero geesinimada ah oo ay ku biiraan ciidamada ee Innovations wacanu by dadka Ajou.
update University, asaasay 1973 hoos ku dhiga ah ee “Jaamacada ugu wanaagsan ee qarniga 21aad Asia ee”, waa jaamacad keentay cilmi leh 10 koleejyada Korea. Waxay ku taallaa in Suwon, ku saabsan 30km koonfur ka Seoul, hagaajinta leeyahay 14,000 ardayda (9,000 undergraduate, 3,500 graduate, iyo 1,500 koorsooyinka kale).
xoog The barnaamijyada tacliimeed Ajou iyo cilmi been Engineering, IT, BT, NT, Science Medical, Ganacsiga iyo International Studies. Ajou waxaa si balaadhan looga aqoonsan yahay barnaamijyada caalamiga ah ay cusub oo taageero xoog leh la siiyo ardayda caalamiga ah oo ay leedahay iskaashi iskaashi ka badan 200 jaamacadaha 58 dalalka. Waxaa jira tiro balaadhan oo ah barnaamijyada caalamiga ah ee ay ka mid yihiin Ajou arday iyo macalimiinta is dhaafsi, dugsiga xagaaga caalamiga ah, barnaamijka luqad Korean, iwm. ardayda International qaadato koorsooyin ku bixiyeen in English by heerkoodu kala duwan. Hagaaji Maanta wuxuu ku saabsan yahay soo dhawayn 750 ardayda caalamiga sano ah.
College of Technology Information
College of Sciences Dabiiciga ah
Division of Studies International
Ma rabtaa discuss Ajou University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista